नेपाल: मेसिन विगारी ठगी गर्ने एउटै ब्यक्तिको ९ वटा पेट्रोल पम्प !
मेसिन विगारी ठगी गर्ने एउटै ब्यक्तिको ९ वटा पेट्रोल पम्प !
मेसिन बिगारेर रिमोर्ट जडान गरी सर्वसाधारण ठग्ने पेट्रोल पम्प संचालकहरुको एउटा मात्र नभएर सो भन्दा बढी पेट्रोल पम्पहरु रहेको फेला परेको छ। एउटैको ९ वटा पम्पहरु रहेको फेला परेको छ। टंक कुमार क्षेत्रीको नाममा नेपाल आयल निगमले ९ वटा पम्प संचालन गर्न दिएको छ । उनको उपत्यकाका साथै धादिङ, नुवाकोट र बारामा पम्पहरु रहेका छन् ।
ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको प्रशान्ती, स्वयम्भुमा रहेको बंगलामुखी, सुकेधारामा रहेको इलाइट, भक्तपुरमा रहेको गुह्रेश्वरी, जोरपाटीमा रहेको न्यु लामा, भक्तपुरमा नै रहेको महेश्वरी, त्रिशुलीमा रहेको जल्पा, धादिङमा रहेको भैरवी र बाराको अमलेखगन्जमा रहेको आकाश आयल क्षेत्रीले संचालन गर्दै आएका छन् । उनले संचालन गर्दै आएको अधिकांश पम्पमा मेसिन जडान गरेको भेटिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
प्रहरीले केही समयअघि छापा मार्दा उनको एकान्तकुनामा रहेको प्रशान्ती, स्वयम्भुमा रहेको बंगलामुखी लगायत पम्पमा रिर्मोट जडान गरिएको पाइएको थियो । हाल उनी फरार रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रलाद तिमल्सिनाको नाममा पनि ३ वटा पम्प संचालन गर्न आयल निगमले अनुमति दिएको छ ।
उनको कालीमाटीमा सिता आयल, खसीबजारमा सता फ्युल र महाराजगन्जमा सिता केयर नामक पम्प छन् । सिता आयलमा रिमोर्ट जडान गरी तिमल्सिनाले ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै यशु प्रधानका नाममा पनि ४ वटा पम्प संचालनमा छन् । स्वयम्भुमा रहेको हामा आयल, बल्खुमा रहेको त्रिशक्ती, नयाँबजारमा रहेको जयकुमारी र गुर्जुधारामा रहेको काठमाडौं आयल स्टोर उनको नाममा संचालित छ । त्रिशक्ती पम्पमा रिमोर्ट जडान गरी उनले पनि ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
'अधिकांश पेट्रोल पम्प संचालकहरुले एकभन्दा बढी पम्पहरु संचालन गरेर ठगी गरेको पाइयो', एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले भने' नियमन गर्ने निकायले अल्लि ध्यान दिए समस्या समाधान हुने थियो।'
कसरी हुन्छ पेट्रोल पम्पको मिटरमा सेटिङ (भिडियोसहित)
News from setopati.com
Labels: Petrol Pump owner arrested in Kathmandu